Herzen State pedagogical University of Russia - Study na Russia
tọrọ ntọala : 1797
Echefukwala -atụle Herzen State pedagogical University of Russia
Debanye aha na Herzen State pedagogical University of Russia
Mmadụ Bịa ka obi State pedagogical University of Russia, St.Petersburg. Anyị ga-enwe obi ụtọ ịhụ gị na otu nke kasị ochie na kasị ukwuu na mahadum dị na Russia, a na-agwakọta atụmatụ nke ndị oge gboo Russian mmụta na ndị niile dynamism nke mgbe-emepe emepe izi continuum.
Russian State pedagogical University ịchọrọ ka gị nọrọ na nke anyị ma na-akụzi ihe na obi ụtọ. Ọ bụ anyị kasị nwee obi eziokwu kweere na inwe mba ụmụ akwụkwọ na-eme ihe dị ukwuu n'ime rụọ nke ọzụzụ ukwuu ruru eru ọkachamara, ma si otú a apụta otu bara uru. Anyị na nye ndụmọdụ gị ka ị na-agụ nke a akwụkwọ nta ntị nke ọma, na ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla ajụjụ ndị ọzọ ma ọ bụ mkpa ụfọdụ, egbula kpọtụrụ anyị International Office.
The Herzen State pedagogical University of Russia (obi University) bụ otu n'ime ndị kasị ochie Onye Ozizi-Ọzụzụ oru na mba. Ọ e tọrọ ntọala na 2(14) Ka 1797 site Emperor Paul m dị ka St. Petersburg Educational House, na mgbe e mesịrị tọọ ntọala maka ndị ọzọ pedagogical oru na XIX - mmalite XX ọtụtụ narị afọ. Ndia bu otu pedagogical Institute site Iwu nke Ndị mmadụ Commissar maka Education on 1 September 1918. on 15 January 1920 na Presidium nke All-Union Executive Kọmitii nyere iwu na ulo akwukwo a ga-aha ya bụ mgbe Alexander Herzen. The Ministry of Education, na-esite iji No. 25 nke 24 January 1991, nyere Leningrad State pedagogical Institute na mahadum ọnọdụ, na a kpọwo ya na Herzen State pedagogical University of Russia kemgbe ahụ.
The mahadum onyinye Russian otu adịwo ukwuu, na anyị na-echeta ndị nganga aha ndị pụtara ìhè ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkà mmụta bụ ndị na-arụ ọrụ na Herzen University, eme ha mmetụta dị ukwuu na mmepe nke mba sayensị na ụlọ ọrụ. N'etiti ha bụ ndị dị otú ahụ na-enye ìhè dị ka academician m. Kurchatov, nna nke Russian nuclear physics akwụkwọ; prọfesọ A. Gershun, nchoputa nke ngwa anya ụlọ ọrụ; na-enyocha mbara igwe S. Glasenapp; academician V. Ipatieff, agha n'ozuzu na a mmiri ọgwụ; A. Fersman, onye ọsụ ụzọ ahụ nke geochemistry, prọfesọ V. Perekalin, na mmiri ọgwụ na-esịn idem ese enyịn mmepe nke na-emepụta ọgwụ ọgwụ ọjọọ Phenibut, eji na aerospace na nkà mmụta ọgwụ na nwa ọrịa uche. The plethora nke a ma ama Herzen mmadụ na-agụnye pedagogues P. Kapterev, V. Soroka-Rossinsky, na A. Pinkevich; chemists V. Verkhovsky, na A. Favorsky, ndị ọkà V. Komarov, ọdịdị mbara ala V. Semenov-nwanna-Shansky na YU. Shokalsky, physiologists L. Orbeli na K. Bykov, na mgbakọ na mwepụ G. Fikhtengolts, akọ akụkọ ihe mere E. Tarle, V. Struve, A. Presnyakov, S. Oldenburg, B. Grekov, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ L. Vygotsky, philologists S. Ozhegov, L. Scherba, V. Zhirmunsky, N. Marr, dere M. Gorky na E. Zamyatin, na ọtụtụ ndị ọzọ. Taa Herzen University mîdaha ihe karịrị 1700 ọkà mmụta, 1000 nke onye jide nwa akwukwo nke Science degrees, 300 bụ dọkịta nke Science, 6 bụ academicians na 9 bụ nke kwekọrọ òtù nke Russian Academy nke Sciences na Russian Academy of Education, na 23 na-Naa ọkà mmụta sayensị nke Russian Federation. na 2012 prọfesọ A. chọrọ, Department of usoro iwu Physics na Astronomy, e ọdịda nke nrite ọlaedo nke Telesio-Galilei Academy of Science (TGA 2012) n'ihi ya isi onyinye mmepe nke ozizi kwantum ubi na curved ohere.
The University si na-agụsị akwụkwọ ka a bukwanu onyinye na mba onodu n'obodo na omenala ndụ. Ụfọdụ n'ime ndị so dee, -ede abụ uri, -arọ, eme ihe nkiri, egwuregwu, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọnụ ọgụgụ na-maara nke ọma na mpụga nke Russia, dị ka nke ọma, na nsonye: N. Zabolotsky, A. Kushner, V. Sangi, A. Chepurov, L. Reznikov, A. Morozov, L. Egorova.
Ji ụkpụrụ nke President nke Russian Federation No. 30 nke 15 January 1998 Herzen University e esịne ke ndepụta nke State Corpus of Heritage na saịtị na Russia. Ụkpụrụ a bụ ihe àmà ọzọ na taa University bụ n'etiti ndị ndú Russian mmụta, a isi na omenala na ebe agụmakwụkwọ, a pụrụ iche Multidiscipline nnyocha na izi mgbagwoju nke na-ekwusi ike na-amalite ihe kasị mma agụmakwụkwọ na izi omenala na Russia na n'ụwa nile.
obi State pedagogical University of Russia
Taa University mejupụtara 5 institutes, 21 ikike iche, 3 affiliations n'obodo ndị Volkhov, Vyborg, na Makhachkala, n'elu 130 ngalaba, 3 research emmepe, 27 muta na omenala emmepe gụnyere asụsụ Center, na DAAD Resource Center, na St. Petersburg School of Conference na ikọ isi na Translation. Ngalaba nile na-arụ ọrụ na nso nkwado na University si n'elu 25 research emmepe na laboratories, na nsonye: na Physics Research Institute, na Continuing Education Research Institute, na General Education Research Institute.
N'akụkụ ọzụzụ nke ukwuu ruru eru ozizi ka mahadum na ụlọ akwụkwọ sekọndrị, Herzen University awade a sara mbara elu ugwu nke na-abụghị ezi ihe specializations, ikwe ka ọ dabara n'ime Atiya nke omenala mahadum. The mahadum na-ekweta, ụmụ akwụkwọ na- 57 nkuzi ihe ike na 10 iche iche (32 Bachelor si mmemme, 2 Specialist na programmụ na 23 Master mmemme). The mahadum awade omume na Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences, Natural Sciences, na Social Sciences. Ndị ọhụrụ rụzuru na ngalaba nke mmụta management na akụnụba, ntorobịa ikpe ziri ezi, etc. etolite ntọ-ala nke ọzụzụ omume n'ihi ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, economists, ọka iwu, oru, IT ọkachamara na àgwà akara oru. ka na-, onye nkụzi-ọzụzụ omume ịnọgide mkpa maka Herzen University. Site ya akụkọ ihe mere eme na mahadum kemgbe na-anọgide ndị kasị ibu otutu nkụzi na-azụ ndị na Russia, atụgharị si ukwuu ọkachamara nkụzi.
Faculty of Psychology na Pedagogy
Faculty of Russian ka a asụsụ mba ọzọ
Faculty of agbazi Education
Faculty of Technology na itumgbere
Institute of the People nke North
Institute nke Humanities
Research Institute of Ịga n'ihu Onye Ozizi Education
The University si n'ọbá akwụkwọ nwere a pụrụ iche collection, nke na-agụnye akwụkwọ nyere laa azụ na narị afọ nke 11 na obere akwụkwọ nke 18 nke 20 na narị afọ; ọ nọmba karịrị 3 nde ihe.
Isi University campus na nsogbu na nnọọ center nke ochie St. Petersburg n'ime 5-15 ewe ije ije minit nke isi akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị bụ ebe obodo. The ụlọ rụrụ ya ma ama architects nke narị afọ nke 18 na-etolite a mara mma ensemble tinyere konkiri Moika mkpọda. Nke a ụkpụrụ ụlọ mgbagwoju so n'ime ndepụta nke World Heritage ihe site UNESCO na 1990. The Herzen University e eze ụghalaahia dị ka a National Akụkọ na omenala ịrịba ama nke president iwu na 1998.
Ị chọrọ -atụle Herzen State pedagogical University of Russia ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Jikọọ na-atụle nke Herzen State pedagogical University of Russia.